Tag: ecommerce ikpo okwu | Martech Zone
Kpado: ecommerce n'elu ikpo okwu
Volusion: Ihe Niile Ebube Ecommerce Weebụsaịtị Nrụpụta
Mpempe akwụkwọ Volusion niile na-eme ka ọ dị mfe ịtọlite ​​ụlọ ahịa gị na nkeji. Usoro ha na-eme ka ọ dị mfe iji rụọ ụlọ ahịa gị, ịnakwere ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ, ịchekwa ihe ma ọ bụ imelite imepụta saịtị gị. Egwuregwu ecommerce ha na-enye ndị na-ere ahịa ikike ibili ma na-arụ ọrụ na njiri mara ọrụ yana ọmarịcha njirimara. Volusion's Ecommerce Builder Atụmatụ: Storelọ ahịa Nchịkwa - Hazie ọdịdị na mmetụta nke saịtị gị site na iji usoro ọkachamara na editọ saịtị anyị dị ike.
KWI: ifiedjikọtara CRM, POS, Ecommerce na azụmaahịa maka ndị na-ere ahịa ọpụrụiche
KWI Unified Commerce Platform bụ igwe ojii, ngwugwu njedebe maka ndị na-ere ahịa pụrụ iche. Ihe ngwọta KWI, nke gụnyere POS, Merchandising, na eCommerce na-akwado site na otu nchekwa data, na-enye ndị na-ere ahịa ihe na-enweghị ntụpọ, ahụmịhe ọwa niile. KWI Unified Commerce Platform Customer Relationship Management (CRM) - nakọta data na ezigbo oge, yabụ na ọwa gị niile nwere ozi dị ugbu a. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịhụ ọkwa VIP, mmemme pụrụ iche dịka ụbọchị ọmụmụ, ncheta ọmụmụ na ihe ndị ọzọ na-akpata, gosipụtara na POS